ဘုန်းကျော်: To DPNS-Branches
ဒီနေ့အထိ တွေ့ရတဲ့ Party Leaders....on web.
အထူးအစည်းအဝေးမှာတွေ့ရတဲ့ Leaders on Web.
မြန်မာဆိုဒ်မှာတွေ့ရတဲ့ Leaders updated on August 25 2009.
ကျနော် စဉ်စားနေမိတယ်။ ပါတီဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီနဲ့ ဗဟိုကော်မတီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခု။ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဆိုတာက....ဗဟိုကို စီမံခန့်ခွဲထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ဖွဲ့ထားတဲ့ ဗျူရိုကရက်လားပေါ့...။ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီက ဗဟိုကော်မတီကို တာဝန်ခံဖို့အတွက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ ဒီနေ့အထိWebမှာ မပြင်သေးတာက...အကြောင်းရင်းတော့ရှိရမယ်။ တစ်က.. မအားလို့လား...။ မအားစရာအကြောင်းလည်းမရှိ...တချက်ကလစ်လုပ်ပြီး ငါးမိနှစ်အချိန်ပေးရင်ဖြစ်တယ်။ နှစ်က..တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ထိန်ချန်ထားတာလား။
၀က်ဆိုဒ်မှာ ပါတီဝင်အသစ်တွေစုဆောင်းဖို့အတွက် နေရာတခုရှိသင့်တယ်။ Membership ဆိုတဲ့ Tag တခုလုပ်ပြီး မန်ဘာစုဆောင်းလို့ရတယ်။ ဒါဆိုရင် ပါတီကို စိတ်ဝင်စားတဲ့...မည့်သည့်မြန်မာနိုင်ငံသားမဆို အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်တယ်..။ ပါတီ Membership ကြေးကိုလည်း ပေးဆောင်စေရမယ်။ဥပမာ တလ(သို့) တနှစ် မန်ဘာကြေးပေးရင် ပါတီရံပုံငွေကို သူများဆီက လက်ဖြန့်တောင်းစရာမလိုဘူးပေါ့..။ ဟုတ်ဘူးလား။ အခုရှိနေတဲ့ပါတီဝင်တွေ မန်ဘာကြေးအဖြစ် တနှစ်ကိုဒေါ်လာ ၁၀၀ ပဲထည့်ရင် အယောက်တသိန်းဆိုရင် ဒေါ်လာတစ်သိန်းရပြီပေါ့..။ ဒါဆိုရင် NED ကို ဘုရားထူး၊ သတော်ဦးတင်စရာမလိုဘူးပေါ့..။ တနှစ်တရာဆိုတာ ဆေးလိပ်ဖိုးတောင်မရှိကြောင်းပါ။ တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကတော့ စည်းရုံးရေးဌာနကလူတွေပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာ...။
အမေရိန်ကန်၊ နော်ဝေ၊ မလေးရှား၊ ဂျပန် စတဲ့ ဌာနခွဲတွေဟာ တခြားလေးလေးပင်ပင်ကို မစဉ်းစားမလုပ်ပဲနဲ့ လူသစ်ရရေး Membership ရရေးကိုဇောင်းပေးပြီးလုပ်သင့်တာပေါ့နော်...။ အခုတော့ နာမည်ပဲကျန်တော့ သည်လိုမျိုးဖြစ်ပြီ..။ တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေ။ မလုပ်ရင်အရင်ကတည်းက မဖွဲ့နဲ့ပေါ့ဗျာ..။ ကဲကဲ...အားနေတုန်း အာလိုက်တယ်ဗျို့ ...။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, August 25, 2009